Kyushu University - Fianarana in Japana. EducationBro Magazine
Aza adino ny discuss Kyushu University
Tamin'ny faha-100 taonan'ny in 2011, Kyushu University nanangana ny teny filamatra “fandrosoana Top 100 University” hitsipihany eo an-tampon'ny anjerimanontolo-jato eo amin'izao tontolo izao amin'ny saha rehetra. Ny fototra filôzôfia dia ny “foana mahaleotena fanavaozana ary koa mba ho azo antoka ny iraisam-pirenena toetra ny fanabeazana, ary ho lasa ivon'ny fikarohana sy ny fanabeazana ny fitsipika ambony indrindra, feno ny heriny, ary tsy tapaka niresaka zava-tsarotra ho avy.”
Kyushu University ny hery ho toy ny fanalahidy oniversite dia hoe mpikaroka mitarika famoronana, fototra fianarany ao amin'ny isan-karazany ny saha momba ny fototry ny ara-tsaina te hahafanta-javatra. A malalaka akademika fototra ho an'ny fikarohana ara-kolontsaina sy ara-tsosialy dia mampivelatra ny fiainana, lasa ny antony manosika hery ho an'ny zava-baovao, ary efa namela antsika mba sahy hiatrika mba indray mandeha takatry ny saina maneran-tontolo iainana, amin 'ny amin'izao fotoana izao harena sy ny angovo olana, sy ny aretina sy ny fitsaboana ny aretina tsy azo sitranina, izay nitondra ny zava-bita lehibe maro. Mifantoka indray amin'ny ireo soatoavina fototry ny fikarohana akademika, dia hanamafy orina ny fanohanana ny rafitra mba hampivelatra bebe kokoa izany.
In akademika fikarohana, isika dia ho lasa ny fiara hery ny fifandraisana eo amin'ny samy hafa saha mba hampivelatra sisin vaovao. Isika samy mikendry ny hampiroborobo ny sehatra akademika tena manokana ary koa ny mba hampiray sy mampifangaro ireo sehatra akademika ho lehibe kokoa manontolo.
Fa ny faritra izay tokony hitarika ny tena izao tontolo izao-kilasy fikarohana zava-bita, dia mikendry ny fanampiny avo sy mametraka ny fanamafisana amin'ny fanohanana ireo sehatra mba hanangana tontolo izao-kilasy Research Center, mavitrika fampiroboroboana ny fanapahana-lelan fikarohana izay mitondra any amin'ny famahana ny olana fa ny olombelona tarehiny sy ny nanolotra sy fampisehoana rafitra ara-tsosialy vaovao.
Siansa sy teknolojia, anisan'izany ny humanities sy ny siansa sosialy, ny fanohanana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ankoatry ny, andro maoderina izao dia mitaky ny olona izay mahay mitendry anjara mavitrika ao amin'ny fiaraha-monina sy ny toe-karena globalizing. Olona toy izany dia tokony hanana fahalalana fototra manerana ny humanities sy ny siansa ary koa ny fahaizana misaina interdisciplinary ho olana-famahana sy ny fahaizana sy ny toe-tsaina mba autonomously Mbola mianatra ny mamantatra ny olana sy hahita vahaolana. Fifandraisana fahaizana koa ilaina ny miara-miasa sy hanorina fifandraisana tsara amin'ny olona mitana ny soatoavina isan-karazany, ary izany dia ahitana ny fahaizany teny vahiny. Kyushu University mikendry ny develope toy izany fahaiza-manao amin'ny mpianatra, ary amin'ny alalan'ny fampiroboroboana mavitrika fianarana any ivelany amin'ny fanabeazana fototra departemanta sy ny sampan-draharaha vaovao izay nomanina, dia nampiofana mpianatra mavitrika amin'ny avo fanentanana iraisam-pirenena.
Kyushu no ny vavahady an'i Japana noho ny mandray kontinanta sivilizasiona hatramin'ny andro fahiny sy efa-kevitra eo an-toerana miaraka amin'ny fifandeferana kolontsaina ho an'ny kolontsaina samy hafa. Ankoatry ny, ny toeram-pianarana no misy ao amin'ny faritra izay voalohany indrindra naka kontinanta kolontsaina, ary ny manodidina azy ny manan-karena toetra ny ranomasina sy ny tendrombohitra. Mpianatra mampitombo ao izany manan-karena ara-kolontsaina sy tontolo iainana voajanahary, amin'ny tsara ny mpampianatra eo amin'ny fampianarana sy ny fikarohana, ny cosmopolitan mpianatra vatana, ary ny sakany-miainga fifandraisana amin'ny olona ao amin'ny fiaraha-monina eo an-toerana sy amin'ny orinasa eo an-toerana; izy ireo ho mahaleo tena sy hanana ho avy mpitarika ny fiaraha-monina.
Ny ambany sy ny fahanteran'ny mponina piterahana, Zava-dehibe ny mampitombo ny indostria sy ny asa mba hampitombo dia mandroso ny manan-karena kolontsaina underpinned amin'ny alalan'ny asa ara-toekarena mavitrika. Kyushu University dia anjara-kery ho any amin'ny famoronana sy ny fampandrosoana ny orinasa eo an-toerana amin'ny alalan'ny fitarihana zava-baovao amin'ny siansa sy ny teknolojia. Tato anatin'ny taona vitsy lasa, siansa sy ny teknolojia fanavaozana efa mampihatra haingana sy ampiharina eo amin'ny fiaraha-monina amin'ny alalan'ny fifandraisana malalaka-miainga eo amin'ny anjerimanontolo, orinasa, -bahoaka sehatra, ary ny sehatra tsy miankina. Araka ny hita ao amin'ny fikarohana momba ny angovo sy ny ara-tsosialy hidrôzenina fotodrafitrasa vaovao, Kyushu University anjara amin'ny faritra vitalization amin'ny alalan'ny lasa fototry ny misokatra fanavaozana sy ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa matanjaka, academia, -bahoaka sehatra, ary ny sehatra tsy miankina.
Relocation ny Ito Campus sy ny concomitant karena ny toerana, izay nanomboka in 2005, dia Mandroso hampandeha tsara, ary ho vita amin'ny taona ketra 2018.
Manoloana ny fampiharana ny ireo tanjona, tamin'ny Oktobra Kyushu Nanoratra University "Action Plan 2015."
Action Plan (hevi-dehibe)
– Mitarika fikarohana ny ambony indrindra eran-fenitra sy mamorona zava-baovao
– Hanampy amin'ny maneran-talenta
– Anjara ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana sy iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny nandroso fitsaboana
– Fampandrosoana ny toeram-pianarana ny mpianatra kokoa, mpiasa, ary ny sekoly ambony ho mpikambana dia afaka mirehareha ny.
– fandaminana fanavaozana
– A oniversite miforona amin'ny voizin'olon-droa miaraka amin'ny fiaraha-monina
Kyushu University Mampirisika ny asa isan-karazany ny fanabeazana, fikarohana, pitsaboana fanafody, ary ny fandraisana anjara amin'ny fiaraha-monina sy mihazona ny sata toy ny oniversite izay foana ho amin'ny hoavy miatrika olana.
Graduate School ny Lalàna – English Program
Ianao ve mila discuss Kyushu University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Kyushu University ofisialy Facebook